Daacish oo lagu baaqay in laga hortago, si aysan Libya u noqonin Somalia oo kale. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Daacish oo lagu baaqay in laga hortago, si aysan Libya u noqonin Somalia oo kale.
Axmed Maxamed Qadaafi Al-dam oo ay ilmo adeer yihiin Hoggaamiyihii hore ee Libya, Mucamar Alqadaafi ayaa sheegay inay Dacaish doonayso inay Deganaansho la’aan ka sii abuuraan dalka Libya, sida Somalia oo kale.
Axmed Maxamed Qadaafi oo haatan masaafuris ugu nool caasimadda dalka Masar ee Qaahira ayaa hadalkaasi ku sheegay Wareysi lagu soo daabacay Shabakadda Wararka Idaacadda Codka Maraykanka ee voanews.com ayaa ku baaqay in laga hortago Kooxda Daacish ee ku sii qulqulayo dalka Somalia.
“Kumanaan ka tirsan Kooxda Daacish ayaa haatan ku sugan Libya, haddii aan laga hortegin waxaty Libya la mid noqon doontaa Somalia” ayuu yiri Axmed Maxamed Qadaafi.
Waxa uu intaasi ku daray haddii ay Daacish la wareegaan Liibya inaysan nabad ka jiri doonin Badda Mediterranean Sea ama dhamaan Waqooyiga Afrika.
Axmed Maxamed Qadaafi oo lagu tilmaamao Siyaasi Furfuran waxa uu dadka Liibiyaanka ugu baaqay inay baraarugaan, iskana illaabaan waxyaabihii horey uga dhacay dalka Libya, una soo jeestaan Dib-u-heshiisiin iyo Dib-u-dhiska dalka.
(SAWIRO): Shirkii Carabta iyo Hindiya ku yeesheen Baxrayn oo lagu taageeray Dowladda Federalka iyo Midnimadda Somalia.
Diyaaradaha Kenya oo weli duqeynayo deegaano ka tirsan Goballadda Gedo iyo Bay.